I-Chuwi Laptop Air, ilaptop entsha ephefumlelwe yiMacBook Air | Iindaba zeGajethi
UChuwi ngu Enye yeenkampani ezidumileyo zaseTshayina kule minyaka idlulileyo. Kwikhathalogu yayo sinokubona kwiiLaptops ukuya kwiitafile. Kwaye kweli candelo lokugqibela apho ukuthatha inxaxheba kwalo kuye kwabonakala kakhulu. Kwakhona, uChuwi yenye yeenkampani ezikhethe kakhulu kwimodeli eguqulwayo, apho kukho ezinye iindlela ezilungileyo kakhulu kunye nexabiso elifikelelekayo ngakumbi kuneemveliso eziqhelekileyo ezaziwayo.
Nangona kunjalo, ukumiliselwa kwakutshanje okwenziwe yinkampani kujolise kwicandelo le ii-ultrabooks Ixabiso eliphantsi. Imalunga nento entsha Umoya weLaptop yeChuwiIqela, njengoko igama lalo libonisa, lixhomekeke kakhulu kwimodeli ethandwayo yeApple, iMacBook Air. Nangona intetho yayo ibiziiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ngoku ikho ngoku ukuthengwa.
1 Ukujonga 'i-premium' ngobuncinci obugqithisileyo
2 Amandla omoya e-Chuwi Laptop kunye nenkumbulo
3 Unxibelelwano kunye nebhetri
4 Inkqubo yokusebenza, izinto ezongezelelweyo kunye nexabiso
Ukujonga 'i-premium' ngobuncinci obugqithisileyo
Le Chuwi Laptop Air ilaptop efikelela kwifayile ye- Isikrini se-intshi eyi-14,1. Inika isisombululo esiphezulu seepixels eziyi-1.920 x 1.080. Kwaye iphaneli luhlobo lwe-IPS. Ikwayikhompyuter ene-chassis ebhityileyo (6 mm ubukhulu). Kwaye inikezela ngenkangeleko ecocekileyo kakhulu ngenxa yokugqitywa kwayo kwealuminiyam.
Kwelinye icala, yakhe I-keyboard ikhululekile kwaye inamaqhosha ahlukeneyo, ukongeza ekunikezeleni ngasemva kwabo bathambekele ekusebenzeni ebusuku okanye kwiindawo ezikhanyayo. Njengokuba ukufana nemodeli ye-Apple kwakungonelanga, ilogo yeChuwi esekhusini iyakhanyisa xa ilaptop isebenza.
Amandla omoya e-Chuwi Laptop kunye nenkumbulo
Okwangoku, ngokubhekisele kumandla, le Chuwi Laptop Air inayo ngaphakathi I-Intel Celeron N3540 4-core processor evalelwe kwi-1,1 GHz kwimo yesiqhelo kunye ne-2,2 GHz kwimowudi yeTurbo. Kule chip kufuneka songeze i-RAM ye-8 GB yohlobo lwe-DDR3.
Xa kuziwa kwindawo yokugcina, I-Chuwi Laptop Air ine-128GB SSD yokuqhuba. Ungayandisa ngokubonga ngokusetyenziswa kwamakhadi e-MicroSD (ubuninzi be-128 GB), kunye nokusebenzisa izinto zangaphandle ezinje ngehard disk okanye imemori ye-USB.
Ngoluqwalaselo, usenokuba sele uqaphele ukuba ayingomatshini wokudlala, kodwa uyayenza iya kuba nokusebenza okungagungqiyo ngokwemisebenzi yeofisi kunye nemisebenzi yemihla ngemihla. Kwaye liqela elisebenza ngokuhamba, linobunzima obuncinci, licekeceke kakhulu kunye nokuzimela okuhamba nako konke.
Unxibelelwano kunye nebhetri
Kungabonakala ngathi kuyaxoka, kodwa ngelixa ezo zivela eCupertino ziye zancipha kunxibelelwano kwizixhobo zazo, zikhona ezinye iimveliso ezithi, nangona iimodeli zazo zibhityile, ziyaqhubeka nokubonelela ngesixhobo esihle sonxibelelwano ngokwasemacaleni. Kule meko ithile yeChuwi Laptop Air siya kuba nayo izibuko le-HDMI ukuze idityaniswe kwisibekeli sangaphandle esihambelanayo okanye isibonisi. Siya kuba nayo amazibuko amabini e-USB 3.0 ukuze ukwazi ukudibanisa iipheripherip kunye ne-MicroSD slot.
Unxibelelwano olungenazingcingo kule laptop ulonwabele kakuhle. Kwelinye icala siya kuba nayo Uhlobo lweBluetooth 4.0 kunye nesantya esiphezulu sebhendi yeWiFi. Ayinayo i-slot yeSIM khadi, kodwa ngokuqinisekileyo ngeli nqanaba ixabiso beliya kunyuka.
Ngokubhekisele kwibhetri yayo, sele sikuxelele ngaphambili ukuba liqela elinokuthi lilonke libe yinto elungileyo yokusebenza ngaphandle kwekhaya okanye eofisini. Kwaye ukuze yenzeke le nto, ubomi bebhetri obudityaniswa yiChuwi Laptop Air kufuneka bubalasele. Mhlawumbi ayifiki kwiiyure ezili-11 ukuba ezinye iibrendi kweli candelo zibhengeze, kodwa bayaqinisekisa ukuba ungasebenza nale laptop kangangeeyure eziyi-8 ngqo kwityala elinye. Ewe kunjalo, oku kuyakuhlala kuxhomekeka kwindlela esilisebenzisa ngayo iqela.
Inkqubo yokusebenza, izinto ezongezelelweyo kunye nexabiso
Okokugqibela, sixelela ukuba eli qela inayo Windows 10 ngaphakathi. Kule meko yinguqulelo yesiNgesi, nangona sele uza kwazi ukuba ungalutshintsha ulwimi lwayo. Okwangoku, njengokongezelelekileyo uya kuba ne-trackpad eqonda izijekulo (ukusondeza, ukuskrola ngeminwe emibini, njl.). Kuya kufuneka ugcine engqondweni une-2 megapixel webcam. Oku kukhatshwa yimakrofoni emibini. Ukongeza, incwadana inezithethi ezibini zestiriyo.
El I-Chuwi Laptop Air yenye yeendlela ezinomdla kakhulu. Kwaye into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuba ufuna iqela elisebenzela wena xa ukhenketha okanye usebenza phesheya. Ukongeza, ixabiso layo yenye yezinto ezinomtsalane kwiphakheji: 340 euro.
Iinkcukacha ezithe vetshe: Chuwi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-Chuwi Laptop Air, ilaptop entsha ephefumlelwe yiMacBook Air